Running Man Myanmar Subtitles: November 2016
ယှဉ်ပြိုင်ဆော့ကစား ကြယ်ပွင့်များ အပိုင်း ၃၂၇
Daeguရှိ Seomun ဈေးတန်းရဲ့ စားသောက်တန်းကနေ ဒီတစ်ပတ်အစီစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်များအနေနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှ ဇာတ်သိမ်းခဲ့တဲ့
Jealousy Incarnate ဇာတ်ကားမှ မင်းသား Jo Jung Suk နဲ့
EXO အဖွဲ့မှ အဆိုတော် D.O တို့က အဓိက ပါဝင်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ညီအစ်ကိုတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသဖို့တွက် Jae Seok နဲ့ Kwang Soo တို့ကို Bromance House ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ စတင်စေခဲ့ပါတယ်။
ဧည့်သည်ညီအစ်ကို ၂ယောက်မှာကြားထားသမျှ အစားသောက်တွေကို
ရှုံးသူက ကျသင့်ငွေရှင်းဖို့ ပေါ့ပါးတဲ့ အမြန်ကစားနည်းတွေနဲ့ ရွေးချယ်ရင်း
ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာနေရာမှာ ကျန်အဖွဲ့သားတွေနဲ့ စုပေါင်းခဲ့ပါတယ်။
ကစားနည်းစဖို့တွက် Rock-Paper-Scissors နည်းနဲ့ လူမရွေးတော့ပဲ
Night Market Bingo ကစားနည်းတွက်
နှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့ Bingo Sticker လေးတွေလိုက်စုရင်း
နောက်ဆုံး Mission အနေနဲ့Card ရွေးရတဲ့ကစားနည်းနဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးမခံရအောင်ေ
အဲဒီလိုနဲ့ ကံဆိုးသူမောင်ရှင်တို့အဖွဲ့က ဘယ်သူကျန်ခဲ့မလဲဆိုတာ
"အညွှန်းကို Onestar မှ ကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Roommate S1 E1
ကြယ်ပွင့်များရဲ့အခန်းဖော် အတွဲ ၁(၁)
Roommate Season 1,Ep 1
အားလုံး စောင့်မျှော်နေတဲ့ Roommate ဆိုတာကြီးလာပါပြီ
HD လေးနဲ့ ကွကိုသာကြည့်ကြပါဗျာ..
(ကို စိုင်းကျော်လင်းရဲ့ ပထမဆုံး ဘာသာပြန်ဖူးတဲ့ ရသစုံလင်ပါ)
Translated by Sai Kyaw Lynn & Aye Nyeing Thu
Duration 1hr 53min 09s
Download with pcloud(For HD 720p)
Download with yoteshin portal(For 360p,480p,720p)
Note: HD down သူများ Pcloud ဖြင့်သာဒေါင်းပါ
ယှဉ်ပြိုင်ဆော့ကစား ကြယ်ပွင့်များ (အပိုင်း ၃၂၆)
Theme... Food Thief Race
ဒီအပိုင်းမှာတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဂန်ဂယ်ရီကြီးမပါဝင်တော့ပါဘူး😢😢
ဒီအပိုင်းမှာတော့ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ယှဉ်ပြိုင်ကြတာပါ
Running Man ရဲ့ ပုံစံအတိုင်း အနိုင်ရတဲ့အသင်းကိုပဲ
ကျွေးတာဆိုတော့ ဘယ်လို ကြိုးစားကြမယ်ဆိုတာ..
ပြောဖို့မေ့သွားတယ် Hidden mission ဆိုပြီးပွဲအစကတည်းကပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်
Encoded by Joker.phs
Review by Thomas Nicolas ACM
ယှဉ်ပြိုင်ဆော့ကစားကြယ်ပွင့်များ အပိုင်း ၂၁၆
Theme နာမည်က Running man Heroes နာမည်လေးအတိုင်းပဲ
အဖွဲ့ဝင် ၇ ယောက်လုံးဟာ စွမ်းအင်တွေအပြည့်ရှိတဲ့
နောက်၁၀နာရီကြာတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေပါတဲ့ အာကသယဉ်ကြီးဟာ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တစ်နေရာကိုရောက်လာမှာပါ သူတို့တွေဟာ
ဒါပေမယ့် လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ ပြန်ယူလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေရရှိဖို့
မစ်ရှင်တွေ ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ဆောင်ပြီးမှ ရရှိမှာပါ ကဲဒီတော့ သူတို့တွေရဲ့စွမ်းအင်တွေပြန်ရမှာလား
ဘယ်လိုမျိုးလှည့်စားမှုေ လးတွေရှိနေအုံးမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှု့အားပေးကြပါအုံး
Translated by Yadanar Hlaing
Review by Ayenyeing Thu Download with Pcloud
ယှဉ်ပြိုင်ဆော့ကစား ကြယ်ပွင့်များ (အပိုင်း 325)
တနည်းအားဖြင့် Lack Of Gary Trip "Get Some Air" လို့အမည်ပေးထားပါတယ်....
Gary Member အနေနဲ့ မပါတဲ့ ပထမဆုံး Ep လဲဖြစ်ပြီး.....Gary က တော့ ဒီ Ep မှာ Special Guest အနေနနဲ့ပါဝက်ခဲ့ပါတယ်
Mission ကို6hours အတွင်းမှာပြီးစီးအောင်လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီး Mission တွေမှာကုန်ကျမယ့် စားစရိတ် သွားလာစရိတ်တွေကိုလောက်ငှအောင်သုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်
Mission တစ်ခုဆီတိုင်းမှာ Gary နဲ့ Mission အတူလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ Discount ရပြီး ကုန်ကျစရိတ်တွေကလျော့နည်းသွားမှာပါ....
ပြီးနောက် Member အားလုံး Gary Studio သွားပြီး Gary နဲ့အတူ Song ဆိုတဲ့ Mission ထမ်းဆောင်ရမှာပါ...(Gary က သူ Guest အဖြစ်ပါဝင်တာမသိသေးပါဘူး Member တွေရောက်လာမှသိတယ်)
နောက်ပြီး Gary မသိအောင် 7012 အတွက် Mission ကတော့ Gary အတွက် Member 6ယောက်က selfie ရိုက်ပြီး Gary မသိအောင် သူ့ရဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းမှာလိုက်ကပ်ရတဲ့ Mission
တွေထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး (sefile ဆွဲတဲ့နေရာမှာ Gary အတွက် နေရာ တစ်နေရာချန်ထားပေးခဲ့ပါတယ် 7012 ဆိုတာအဲဒါပါပဲ 7=7member,012= forever)
Gary ရဲ့ bicycleခိုးယူပြီး Mission အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်
နောက်ဆုံးမှာတော့ Gary အတွက်အရေးပါပြီး အမှတ်ရစေမယ် ပစ္စည်းဝယ်းပေးရပါတယ်...
အားလုံးရဲ့ စိတ်ကူးအတိုင်း ဘောပင် 7ချောင်းဝယ်ခဲ့ပါတယ် တစ်ယောက်တစ်ချောင်းစီပေါ့ ဘောပင်ကနေရာတကာအသုံးဝင်တဲ့အရာပါပဲ....
ဒီ Ep မှာ Monday Couple moment လဲအများအပြားပါဝင်ပြီး Monday Couple Fan တွေပျော်ရွှင်ကျေနပ်ကြပါလိမ့်မယ်....
ထူးထူးခြားခြား ဒီ Ep မှာ Mission တွေကလဲပျော်စရာကောင်းပြီး လူရိုးကြီးGary ကိုဘယ်လို လှည့်စားပြီး Gary မသိအောင် secret Mission တွေဘယ်လိုထမ်းဆောင်ကြမလဲ? ????
Monday Couple ကလဲ ဘယ်လိုမျိုး Skinship တွေနဲ့ သူတို့ 2ယောက်ကြားက အမှန်တကယ် Relationships ကို Fan ကိုသိမြင်နိုင်ပြီး Fan တွေအတွက်တော့အရမ်းဝမ်းသာစေတဲ့သူတို့ 2ယောက်ပတ်သက်မှုက????
Gary ဟာ သူတို့အတွက် မိသားစုအဖြစ်အဖြစ်အမြဲတမ်းသတ်မှတ်ထားပြီး Garyကတော့ သူတို့အတွက် အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်ပါပဲ.....
Encoded by Jocker.phs
Review by Gary Lolo-Nay Thurain
Download with Pcloud(720p HD)
ယှဉ်ပြိုင်ဆော့ကစား ကြယ်ပွင့်များ အပိုင်း ၃၈
Yoomes Bond Collection Part (1)
Running man ရဲ့အရင်တုန်းကအပိုင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုချင်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက်အထူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီအပိုင်းလေးကတော့ ဧည့်သည်မပါဝင်ပဲ အဖွဲ့ဝင် 8 ယောက်တည်း ကစားထားတဲ့အပိုင်းလေးပါ ဒီအပိုင်းလေးက အပိုင်း ၃၈ရဲ့ ပထမအပိုင်းလေးပါ ယူဂျယ်ဆော့ရဲ့ Yoomes bond လို့
အမည်တွင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးပါ ဒီအပိုင်းမှာ အဖွဲ့ဝင် တွေဟာ မဖွင့်လှစ်ရသေးတဲ့ဆေးရုံအသစ်ကြီးထဲမှာ မစ်ရှင်လုပ်ရမှာပါ
မစ်ရှင်ကတော့ အဖွဲ့ဝင် တွေဟာ ဧည့်သည်တွေပါဝင်တယ်ထင်ပြီးဆေးရုံအနှံ့မှာ
ဧည့်သည်တွေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာ ယူဂျယ်ဆော့ကတော့ ကျန်တဲ့ သူ တွေကိုရှင်းပစ်ဖို့လျှို့ဝှက်မစ်ရှင်ထမ်းဆောင်ရမှာပါ ယူဂျယ်ဆော့တစ်ယောက်
ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ရှင်းပစ်ရမှာလဲ အဖွဲ့ဝင်တွေကိုရော
Encoded by Linn Htet Oo
Download with Yoteshin portal
ယှဉ်ပြိုင်ဆော့ကစား ကြယ်ပွင့်များ အပိုင်း(၁)
Running Man ရဲ့ သမိုင်းအစလို့ပြောလို့ရတဲ့ အပိုင်းလေးပါ
အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ အပိုင်း 1 ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ Yoo jae suk ,Ji suk jin,Kim Jong Kook,
Kang Gary,Song Ji Hyo,Ha Ha,Lee kwang Soo,Song Jong Ki
ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ကတော့ Lee hyori ,Hwang jung Eun တို့ဖြစ်ပါတယ်
အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ဒီအပိုင်းမှာ တော့ အဖွဲ့ဝင် တွေဟာ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပီးယှဉ်ပြိုင်ရပါတယ် ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့နေရာကတော့ ကုန်တိုက်ကြီးထဲမှာဖြစ်ပြီး ညနေခင်း
သူတို့တွေကို ကုန်တိုက်ကြီးထဲမှာ ပိတ်ထားလိုက်ပြီး ကုန်တိုက်ဖွင့်ချိန်အမှီ
မစ်ရှင်တွေအများကြီးနဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ တကယ်လို့နှစ်သင်းစလုံးဟာ ကုန်တိုက်ဖွင့်တဲ့အချိန်အထိအသင်းနှစ်သင်းစလုံးဟာ မစ်ရှင်တွေမပြီးသေးဘူးဆိုရင်
လူတွေရှေ့မှာ အပြစ်ပေးခံရမှာ ဖြစ်ပြီး တကယ်လို့တစ်သင်းနိုင်ခဲ့ရင်တော့
ကျန်ရှိနေတဲ့ရှုံးနိမ့်တဲ့အသင်းက အပြစ်ပေးခံရမှာပါ ကဲ ဘယ်အသင်းက
အနိုင်ရပြီး ဘယ်အသင်းက အပြစ်ပေးခံရမှာလဲ ဂွမ်ဗာတာ လေးကရော
သမိုင်းအစကတည်းက ကံဆိုးတာလားဆိုတာကို ဒီအပိုင်းလေးကို
အညွန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Ayenyeing Thu ပါ
Law of the Jungle ep 237
စွန့်စွန့်စားစား တောတွင်းသားများ (အပိုင်း ၂၃၇)
Kim Byung-man, Lee Chun-hee, Kim Min-kyo, Park Se-young, Ye Ji-won, Eric Nam, Changsub (BTOB), Seo In-guk, Lee Seon-bin (ko), Kangnam (M.I.B), Ryu Seung-soo, Julien Kang ဒီအပိုင်းလေးမှာတော့ သူတို့တွေဟာမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံရဲ့
တစ်ပိုင်းပါ ဒီအပိုင်းမှာတော့ သူတို့တွေဟာ အဖွဲ့သုံးဖွဲခွဲလိုက်ပြီး
နှစ်ဖွဲ့က လူမရှိတဲ့ကျွန်းပေါ်ကိုပို့ခံရပါတယ် ဒီကျွန်းပေါ်မှာသူတိုတွေဟာ
ဘာပစ္စည်းမှ မပါပဲ ကျွန်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲ မစ်ရှင်တွေလုပ်ရမှာပါ
မစ်ရှင်အောင်မြင်ရင် ချက်ချင်း ကျွန်းပေါ်ကပြန်ရမှာဖြစ်ပြီး
မအောင်မြင်ရင်တော့ ကျွန်းပေါ်မှာ တစ်ညအိပ်ရမှာပါ နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ မွန်ဂိုလီးယားတောတွင်းမှာရှိတဲ့ လူမျိုးစုတွေဆီသွားပြီး
မစ်ရှင်တွေလုပ်ရမှာပါ ကဲ ဒီတော့ သူတို့အားလုံး မစ်ရှင်တွေအောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးမြောက်နိုင်မလားဆိုတာ
(စစကြည့်ချင်းဆိုတော့ နားမလည်ပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်)
အညွန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Ayenyeing Thu ပါ
Download with Pcloud(HD)
ယှဉ်​ပြိုင်​ဆော့ကစား ကြယ်​ပွင့်​များ အပိုင်း ၂၇၈
X -Man Collaboration Special (part1)
ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ X man လို့ နာမည်​ ကြီးတဲ့အပိုင်းလေးပါ
ဧည့်သည်တွေကတော့ Chae Yeon, Lee Jong Soo, Bobby
and B.I. (iKon), Ji Min, Seol Hyun, Andy,
KimLee Ji Hyeon, Kim Jung Nam (Turbo), Stephanie
ဒီအပိုင်းလေးက Christmas အထူးစပယ်ရှယ်အနေနဲ့ကစားတဲ့အပိုင်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်
မစ်ရှင်ကတော့2015ခုနှစ်ရဲ့ X-man ရှာတဲ့ မစ်ရှင်ပါ ဒီပိုင်းလေးရဲ့မှာတော့
ဧည့်သည်တွေနဲ့ runner တွေနဲ့ပေါင်းပြီး X- man နဲ့ R-man ဆိုပြီးအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲလိုက်ပါတယ် ပြီးရင်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အပြိုင်နှောက်ယှက်ကြပြီးပြိုင်ပွဲတွေကိုယှဉ်ပြိုင်ကြရတာပါ စပိုင်လိုမျိုးပဲ X-man အသင်းအနိုင်မရရှိအောင်အမျိုးမျိုးနှောက်ယှက်ရမယ့် အထူးမစ်ရှင်ထမ်းဆောင်ရမယ့်
R-man တစ်ယောက်ပါဝင်ပြီး သူကလည်း X-man ကိုရှာရမှာပါ ဘယ်သူက
2015 ရဲ့ X-man ဖြစ်မလဲ ဘယ်သူကရောR-man ဖြစ်မလဲ ဘယ်လိုတွေယှဉ်ပြိုင်ရမှာလဲ ဆိုတာကတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှု့ပေးကြပါအုံး
Review by Ayenyeing Thu Download with yoteshin portal >>>HERE<<<
Note:5sec ​စောင့်​ပြီး skip ad နှိပ်​ပါ (Testing,Adfly)
ယှဉ်ပြိုင်ဆော့ကစားကြယ်ပွင့်များ အပိုင်း(၃၂၄) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီတစ်ပတ်တော့ တချို့လည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။Running Man အဖွဲ့နဲ့ ၇နှစ်ကြာ လက်တွဲခဲ့တဲ့
Gary ကတော့ သူ့ရဲ့အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂီတအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ဖို့
ဒါကြောင့် ဧည့်သည်တွေတောင်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းမပြုပဲ သူတို့အဖွဲ့သား ၇ ယောက်ထဲ
ရင်းရင်းနှီးနှီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ Gary အတွက် နှုတ်ဆက်လက်ဆောင်ပေးဖို့
သူမသိအောင် တစ်ယောက်တစ်မျိုးခိုးယူခဲ့ကြပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတို့ခိုးယူခဲ့တာတွေနဲ့အတူ
Gary အတွက် သူတို့စိတ်ကူးနဲ့သူတို့ ၀ယ်ယူထားခဲ့ကြတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုပေးရင်း
အပိုင်း ၁ ကနေစလို့ အမှတ်တရဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာနဲ့ စိတ်ကူးပုံဖော်ပေးထားတဲ့
Gary ရဲ့ ပုံတူပန်းချီကားတစ်ချပ် လက်ဆောင်ပေးခဲ့ကြလို့ ၀မ်းသာပြီးမျက်ရည်တောင်
ကျခဲ့ရတဲ့ Gary ဒီလိုအမှတ်တရအချိန်ပေါင်းများစွာကို သူဘယ်လိုမေ့နိုင်မှာတဲ့လဲ
အဖွဲ့သားအားလုံးက Gary အတွက် အောင်မြင်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်
Gary အနာဂါတ်လမ်းခရီးမှာ အောင်မြင်ပါစေ . . .
Running Man ကို အစဉ်တစိုက် အားပေးခဲ့တဲ့ ပရိသတ်ကြီးကိုလည်း
Garyက ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ နှုတ်ဆက်သွားပါတယ်။
အညွှန်းကိုတော့one starမှကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာပြန်သူကတော့Sai Kyaw Lynnပါ။Encoderကတော့Pyi Hein Soeပါ။
Yoteshin Protal(one click download)linkကတော့မနက်ဖြန်တင်ပေးပါမယ်။ပရိတ်သတ်တွေအမြန်ဆုံးကြည့်ရအောင်အမြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။
ယှဉ်​ပြိုင်​​ဆော့ကစား ကြယ်​ပွင်​များ (အပိုင်း ၂၆၀)
ဒီအပိုင်းကတော့ Running Man program ရဲ့ ၅ နှစ်ပြည့်အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့
ရိုက်တဲ့အပိုင်းလေးပါ ဧည့်သည်တွေကတော့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့
အဆိုတော်တွေ နဲ့ rapper တွေဖြစ်တဲ့ Kim Gun-mo, Koo Jun-Yup (CLON),
Lee Ha-neul (DJ DOC), Lee Jae-hoon (Cool), Park Joon-hyung (g.o.d) တို့ဖြစ်ပါတယ် ဒီအပိုင်းက တော့ part 1(260) နဲ့ part 2(261) ဆိုပြီရိုက်ထားပါတယ်
ပထမအပိုင်း၂၆၀ ရဲ့မစ်ရှင်ကတော့ မီလီယံနာ ပြိုင်ပွဲပါ ပြိုင်ပွဲပုံစံကတော့
Runner တွေအကုန်လုံးဟာ Album တွေကို ၁၀. မီလီယံရအောင် ရောင်းချရမှာပါ ဘယ်လိုရောင်းချရမှာလဲဆိုတော့ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ မစ်ရှင်တွေကိုထမ်းဆောင်ရမယ် မစ်ရှင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအောင်မြင်တိုင်းမှာ ပိုက်ဆံတွေတိုးလာမှာပါ ဘယ်အဖွဲ့ကအရင်ဆုံး ရရှိမှာလဲ ထုံးစံအတိုင်းပဲဘယ်လိုမစ်ရှင်တွေလုပ် ရအုံးမှာလဲဆိုတာ ပြီးတော့ အပိုင်း ၂ မှာလဲ ဘယ်လိုပုံစံတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲဆိုတာ သေချာလေးဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါအုံးနော်
Translated by Phonemoe Moe
Encoded by Thik San Khank
Download with Pcloud link(720P HD)
ယှဉ်​ပြိုင်​​ဆော့ကစား ကြယ်​ပွင့်​များ (296)
Running man အပိုင်း 296 I AM SORRY, I LOVE YOU Guests: Mẹ Jong Kook, Lee Moon Sae,
Lee Seung Joon, Yoon Gun, Chae Young In
အားလုံးတောင်းဆိုထားတဲ့ Kwang Soo ရဲ့အချစ်ဦးလာတဲ့အပိုင်းလေးပါ ဒီပိုင်းလေးကတော့ Runner တွေရဲ့ ဘဝမှာအရေးပါတဲ့လူတွေ အချစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးမစ်ရှင်တွေလုပ်ရတဲ့အပိုင်းလေးပါ အဖွဲ့ဝင်​ ၇ယောက်လုံးရဲ့ ဧည့်သည် တွေဟာနေရာအနှံမှာ သူတို့ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ် အချိန် ၁၂ နာရီအတွင်းမှာ တစ်နေရာဆီမှာစောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်ဧည့်သည်တွေဆီကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးမစ်ရှင်တွေကို
ဧည့်သည်တွေနဲ့အတူလုပ်ဆောင်ရမှာပါတကယ်လို့ ၁၂ နာရီအတွင်းမှာသာ
မအောင်မြင်ရင်သူတို့တွေအားလုံးဒဏ်ပေးခံရမှာပါ ကဲ runner တွေရဲ့
ဧည့်သည်တွေ အချစ်ဦးတွေကဘယ်သူဖြစ်မလဲ ဧည့်သည်၇ယောက်လုံးနဲ့တွေ့ဆုံပြီး မစ်ရှင်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်မှာလား ဆိုတာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအုံး
Translated by AyenyeingThu
Encoded by Thomas Nicolas ACM Download with yoteshin portal >>HERE<<
ယှဉ်​ပြိုင်​​ဆော့ကစား ကြယ်​ပွင့်​များ (အပိုင်း ၃၂၃)
Theme~ MY AVATAR CAN
Guest(s)~ Kim Jun Hyun, Seo Ji Hye, Min Ho (SHINee),
Jang Do Yeon, Yang Se Chan
ဒီအပိုင်းလေးဟာ gary ရဲ့နောက်ဆုံးပါဝင်တဲ့ဒုတိယအပိုင်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်
တကယ့်မစ်ရှင်ကတော့ member တွေဟာ avatar လို့ခေါ်တဲ့
စံအိမ်တစ်ခုထဲမှာမစ်ရှင်တွေလုပ်ရမှာပါ သူတို့ အိမ်ထဲမဝင်ခင်မှာ
ဧည့်သည်တွေရော member တွေရောကို
သူတို့ဟာတစ်ယောက်တစ်အိတ်ဆီရွေးချယ်ပြီးဝင်သွားရပေမယ့် ပြိုင်ပွဲတွေတစ်ဆင့်ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းမှာလဲလှယ်ခွင့်ရှိပါတယ် နောက်ဆုံးမှာ ဗုံးတွေနဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့အိတ်ပိုင်ရှင်တွေကအပြစ်ပေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ် ကဲ member တွေဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားအံ့သြစရာမစ်ရှင်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီး ဘယ်သူတွေကရွှေအိတ်တွေရမလဲ အမြဲတမ်းရွှေတွေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဂျီဟိုလေးရော ဒီတစ်ခါရွှေတွေရအုံးမှာလား ဘယ်သူကရော ဗုံးပါတဲ့အိတ်ရတဲ့အပြင်ပ်ပြီးအပြစ်ပေးခံရအုံးမလဲဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအုံး
Translated by Sai Kyaw Lynn Encoded by Thomas Nicolas ACM Review by Ayenyeing Thu
Download With Yoteshin Portal 480p or 360